Tababarkii ay qaadanayeen musharaxiinta XDSHSI oo la soo gabagabeeyay. - Cakaara News
Tababarkii ay qaadanayeen musharaxiinta XDSHSI oo la soo gabagabeeyay.
Jigjiga(CN) Isnin.April.20.2015, waxaa maanta la soo gabagabeeyay tababar mudo 2 maalmood ah u socday musharaxiinta xildhibaanada XDSHSI, tababarakaasi oo uu soo diyaariyay XDSHSI ayaa mudadii uu socday lagu qorfaynayay hanaanka anshaxa iyo shuruucda doorashooyinka nidaamka ol olaha doorashooyinka xeer hoosaadka xisbiga, jihooyinka siyaasadeed iyo istaraatiji ee xisbiga.
Waxaana soo xidhitaankii tabaabrkaasi ka hadlay madaxa xarunta dhexe ee XDHSI lehna awood madaxwayne kuxigeen mudane Cabdicasiis Maxamed Cabdi oo si qoto dheer u qaadaa dhigay jihooyinka siyaasadeed, dhaqaale ee XDSHSI marxaladihii kale duwanaa ee uu soo maray tan iyo intii la aas aasay iyo walinba guulaha uu ka soo hooyay xisbigu afartii sano ee ugu danbaysay dhinacayada nabadgalyada, horumarka maamulka suuban, xidhiidhka dadwaynaha, xidhiidhka arimaha dibada iyo ladagaalanka saboolnimada.
Mar uu ka warbixinayay mudane Cabdicasiis jihooyinka iyo istaratijiyada xisbiga ayaa waxa uu sheegay in ay sal u yihiin u sii xoojinaya sugida xuquuqaha shacabka gaadhsiinta shacabka deegaanka horumar waara oo aan soo noqod lahayn abuuritaanka dhaqaalaha iyo ladagaalanka saboolnimada.
Wuxuuna, ku booriyay musharaxiinta XDSHSI ee u tartamaya doorashada dhicidoona bisha inagu soo socoda in ay noqdaan xubno sii xoojiya kana midho dhaliya meel marinta hiigsiga hayaanka horumarineed si mug lehna ugu dhaqmaan una meel mariyeen cashiradii ay qaadanayeen intii uu tababarku socday.
Qaarka mid ah musharaxiinta XDSHSI oo gabagabadii tababarkaasi u waramayay shabakada wararka ee cakaaraNews ayaa sheegay in ay fahan balaadhan oo u noqday gashi horumarineed ka heleen intii uu socday tababarkaasi.
Isku soo wada duub oo XDSHSI ayaa si meeqaam sare ah ugu diyaar garoobay doorashada dalkeena Itoobiya ka dhicidoonta bisha fooda inagu soo haysa wuxuuna kalsooni buuxda ku qabaa shacabka deegaanka maadaamo uu shantii sanno ee ugu danbeeyay hirgaliyay horumarineed balaadhan oo dhinaca kasta leh, taasi oo uu shacabka la hirtagayo waxqabkiisii.